လေ့လာမှုအသစ်အရ porn အသုံးပြုသူများသည် 'သာတူညီမျှသဘောထားများ' ရှိကြသည်။ (၂၀၁၅) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ - လေ့လာမှုအသစ် porn အသုံးပြုသူများသည် '' သာတူညီမျှသဘောထား '' ရှိဟုဆိုသနညျး (2015)
မူရင်းဆောင်းပါး Link ကို: ယောနရောသမများကစက်တင်ဘာလ 22, 2015,
ပြီးခဲ့သည့်လကလိင်သုတေသနဂျာနယ်ထုတ်ဝေ "babyish Is အမှန် '' အမြိုးသမီးမြားမှအမုန်းတရားပြုလုပ်ခြင်း? '' အကြောင်း ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အမျိုးသမီးသဘောထားတွေအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုကိုရှာဖွေဟုဆိုကာစက္ကူ။ ယင်း၏စိတ္တဇမှာတော့လေ့လာမှုနောက်ကွယ်မှကနေဒါသုတေသီများရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစွန်းရောက်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲအဘို့မိမိတို့အထင်အမြင်သေးအောင်အချိန်မဖြုန်း:
"အစွန်းရောက်အမျိုးသမီးသီအိုရီအရ, ညစ်ညမ်းယောက်ျားပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုရှိသည်သင့်အဘယ်သူကိုကျော်လိင်အရာဝတ္ထုထက်အနည်းငယ်ပိုအဖြစ်အမျိုးသမီးများကိုကြည့်ရှုရန်, ရောနှောယင်း၏အသုံးပြုသူများယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလေ့ကငျြ့ခွငျးအားဖွငျ့အမြိုးသမီးမြား၏လက်အောက်ငယ်သားဆက်မှဆောင်ရွက်ပါသည်။ အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်းကနေပေါင်းစပ် variable တွေကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်း၏ nonusers ထက်ကျား nonegalitarianism ပိုမိုထောက်ခံကြသည်ဟုသဘောထားများကိုင်ထားမယ်လို့အဆိုပါယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များအစွန်းရောက်အမျိုးသမီးသီအိုရီကနေဆင်းသက်လာယူဆချက်ကိုထောကျပံ့မပေးခဲ့ပါဘူး။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကအာဏာရာထူးအတွက်အမျိုးသမီးတွေအိမ်ပြင်အလုပ်လုပ်မျက်နှာသို့၎င်း, ညစ်ညမ်း၏ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ-ထက် nonusers ဆီသို့ပိုပြီးသာတူညီမျှသဘောထား-ဆီသို့အမျိုးသမီးတွေကျင်းပခဲ့တယ်။ ထို့ပြင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်ညစ်ညမ်း nonusers အမျိုးသမီးအဖြစ်ရိုးရာမိသားစုဆီသို့နှင့်၎င်းတို့၏ Self-ဖော်ထုတ်ခြင်းမှာသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေအတွက်သိသိသာသာကွာခြားခြင်းမရှိပါ။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအစွန်းရောက်အမျိုးသမီးသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီသောထုံးစံ၌ကျား, မ nonegalitarian သဘောထားတွေနဲ့ဆက်စပ်မရစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ "
သင်တန်း၏, သတင်းဆိုင်များတွင်ရှိ ပြီးသားလေ့လာမှုအပေါ်ခုန်တက် အစွန်းရောက်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲရဲ့ပုလဲ-ဆုပ်ကိုင် prudery ၏အထောက်အထားအဖြစ်။ သို့သော်ဤ smug လစ်ဘရယ်, သုတေသီသူတို့ကိုယ်သူတို့ကဲ့သို့အခြေခံအမျိုးသမီးသီအိုရီအကြောင်းကိုမှားဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအစွန်းရောက်ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းအနေအထားကို porn စောင့်ကြည့်သူကိုယောက်ျားသေချာပေါက်ရှိပါတယ်တောင်းဆိုပါဘူး နောက်ထပ် မကျင့်သောသူထက် misogynistic - သာကြောင်းညစ်ညမ်းယောက်ျား misogyny သို့ indoctrinated နေကြသည်တစ်ဘုံနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦး-အမုန်းပွုစုပြိုးထောအခြား, ညီတူညီမျှထိရောက်သောနည်းလမ်းများနေဆဲတည်ရှိများနှင့်ညစ်ညမ်းမကြည့်ကြဘူးတဲ့သူအများစုကိုအမျိုးသားတွေန်းကျင်အကြီးမားဆုံးတဦးတည်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ပျက်: ဘာသာရေးရှေးရိုးစွဲ။ သင်တို့သည်လူကိုအမြိုးသမီးမြားကိုမုန်းဖို့သင်ယူစေခြင်းငှါ, တထောင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာကြည့်ယူသည့်အခါကသိသာဖြစ်လာသည်နှင့် "Porn ယောက်ျားလိင်အရအခွင့်အရေးလုပ်မထားဘူး" "porn ကိုအသုံးပြုဖို့သူအအမျိုးသားများအတွက်ယောက်ျားထက်လျော့နည်းလိင်အရအခွင့်အရေးများမှာမ" နေကြသည်နှစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော ထုတ်ပြန်ချက်များ။ ကိုကင်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအမူးယစ်ဆေးစွဲဖြစ်ကောင်းဘိန်းဖြူအသုံးပြုမူးယစ်ဆေးစွဲထက်ပိုရှည်နေထိုင်ကြသည်။ ဒါကသင်တို့အဘို့ကိုကင်းကောင်းသောလုပ်မထားဘူး။
ဒါပေမဲ့ဒီလေ့လာမှုကိုပင်ကောင်းစွာ၎င်း၏မိုက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမမေးပါဘူး။ တဦးတည်းအရာများအတွက်, သူတို့သညျ "ရှေ့တစ်နှစ်အတွက် X-rated ရုပ်ရှင်ရှုမြင်ကြသည်။ " သူကြောင့်ပင်ဘာကိုဆိုလိုမည်သူမဆိုအဖြစ် porn အသုံးပြုသူသတ်မှတ်? porn ၏အများစုသည်ယနေ့အွန်လိုင်းရေတိုကလစ်များအတွက်စောင့်ကြည့်နေသည်နှင့်လူအများစုအသုံးမပြုကြသော်လည်းကောင်း "X-rated" or သူတို့ကိုဖော်ပြရန်ဖို့ "ရိုက်ကူး" ။ စစ်တမ်းယူပြီးယောက်ျားမေးခွန်းအနက်ဘယ်လောက် သိ. ၏လမ်းမရှိသောင်; ကျွန်မအတော်လေးအနည်းငယ် porn အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးဖွဲ့စည်းရန်အဖြစ် Porn Hub သုံးစွဲသူတို့ရဲ့တဆယ်မိနစ်ခန့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ် "X-rated ရုပ်ရှင်။ "
ဒါဟာအစကလူ porn အသုံးပြုသူများကကြေညာများအတွက်လက်မခံနိုင်ကျယ်ပြန့်စံပါပဲ။ ရန် masturbates သောဤမက်ထရစ်, တစ်စုံတစ်ဦးကလက်အောက်တွင် facial အလွဲသုံးမှု တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်များအတွက် sidebar မှာကြော်ငြာနှိပ်လိုက်သူတစ်ဦး dude နှင့်အတူတန်းတူကဲ့သို့ထင်မှတ်နေသည် မိန်းကလေးများတောရိုင်း Gone ကိုးလအကြာ။ နှစ်ဦးစလုံးပြတ်ပြတ်သားသားမှားပေမယ့်သင်ဤကဲ့သို့သောလေ့လာမှုလုပ်နေလုပ်နေသည့်အခါတူညီတဲ့အမျိုးအစား၌ထားတော်မူ၏ဖို့ရယ်စရာပါပဲ။ အဆိုပါ ပို. ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ချဉ်းကပ်လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းကိုတိုင်းတာပြီးဆက်စပ်မှုကိုရှာပါလိမ့်မည်။
ဒီအမရေဘာသာစကားနှင့်လှည့်ဖြားအာဆီယံပြဿနာများဖြစ်ကြသည်, သင်မူကား sexism ဘို့မိမိတို့အတိုင်းအတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေ့လာမှုအခညျြးနှီးဖို့ချို့ယွင်းချက်ကနေလှုံ့ဆော်ပေး။ အဆိုပါသုတေသီများစံအဖြစ်လေး data တွေကိုမှတ်အသုံးပြုသော: အာဏာရာထူးအတွက်မိန်းမတို့အဘို့ပံ့ပိုးမှု, အိမ်ပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်နေသောအမျိုးသမီးတွေအတွက်ထောက်ခံမှု, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဘို့ထောက်ခံမှုနှင့် Self-မှတ်ပုံတင်တဲ့အမျိုးသမီးအဖြစ်။ တကယ်ပဲ, သုတေသီများ? ဒါက sexism သင့်ရဲ့အဓိပ်ပါယျလား
ဒီ 1960 ဖြစ်လျှင်သေချာပါကအမျိုးသမီးများကိုအလုပ်အကိုင်များနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တောင်း misogyny ဆိုင်သောနေရာများတွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစ segregated နေ့လယ်စာကောင်တာနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းခြင်းအားဖြင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်ဆိုင်သောနေရာများတွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်မေးခွန်းတွေမထား (ထိုကိစ္စနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု,) misogyny ဂုဏ်ယူစွာတဲ့ပဲ့ကိုင် Liberation မှလက်ထပ်ခဲ့ကြသည့်အခါ 2015 အတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုအကြောင်းကိုဘာမှပြောလိမ့်မယ် ထွေးပွေ့ သူတို့အားတိုးတက်မှု၏အမှတ်အသားများထင်။
ဒါဟာနေဆဲယုံသူတို့အိမ်ပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်သင့်တယ်နေစဉ် (ယရှေုခရစျသ, သင့်မြည်းကိုချွတ်ရအရာတစ်ခုခုကိုကျင့်သောကြောင့်! မင်းသမီး) အမြိုးသမီးမြားကိုမုန်းဖို့သိပ်ကိုလွယ်ကူသို့မဟုတ်လေးတွေပြုစုပျိုးထောင်တစ်ဦးဆွဲသောကွောငျ့ (ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရပေမယ့်သူတစ်ဦးဝတ်ဆင်ရန်လိုလား ကွန်ဒုံး?) ။ အာဏာရာထူးအတွက်တောင်မှအမျိုးသမီးတွေကိုဤမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အရပ်ဌာန၌တူညီသောအမြိုးသမီးတ-မုန်းဥပဒေများစောင့်ရှောက်ဖို့အပေါင်အဖြစ်, ဘိုးဘေးများ၏ပဒေသာထံမှခွင့်ပြုချက်တဲ့တံဆိပ်ခေါင်းရ။ ဆာရာပေလင်း, ဘယ်သူ့ကိုမှသတိမရကြသလော
အမျိုးသမီးတွေအိမ်ပြင်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ရုံးကိုင်ပြီးအကြောင်းကိုမေးခွန်းလွှာကာတွန်းဘိုးဘေးအဘို့အပြစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကပျမ်းမျှ misogynist မှအခမဲ့ဖြတ်သန်းပေးပါ။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်း watch ဘယ်တော့မှသူကိုယောက်ျား၏ကြီးမားသောအများစုတက်စေတဲ့သူ - တကယ်ကဤအခြေခံအခွင့်အရေးများငြင်းပယ်သူသာလူတွေအမာခံဘာသာရေးကွန်ဆာဗေးတစ်များမှာ! Non-porn အသုံးပြုသူအမျိုးအစားရှိသူတို့အားဖြင့်ပြည့်စုံမည်အများဆုံးဖွယ်ရှိခဲ့စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူအဆိုပါသုတေသီများရွေးချယ်သတ်မှတ် sexism: ဒီသိက္ခာမဲ့အပေါ်နယ်စပ်သောဤလေ့လာမှုအတွက်အခြေခံအကျဆုံးအားနည်းချက်ထင်ဟပ်။ အဆိုပါ porn-သုံးပြီးတပ်၌အညီအမျှလိင်အရအခွင့်အရေးလစ်ဘရယ် dudes ဖမ်းအံ့သောငှါကတခြားသတ်မှတ်ချက်များစွာလုံးဝလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။
စိတျထဲတှငျဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနှင့်အတူလေ့လာမှု၏အမှန်တကယ်တွန်းကန်အားမျှမျှတတအားနည်းနေတယ်။ ကပြသနိုင်ဖို့ purports အားလုံးညစ်ညမ်းလောင်သူကိုယောက်ျားမကြာခဏ "သာတူညီမျှသဘောထား။ " ကိုင်ကြောင်းတုန်ယင်နည်းစနစ်ဖယ်ဖြစ်ပါသည်, ငါမှန်ရဲ့သံသယပါဘူး။ ဒါဟာမေးလျှင်, အခါ, သငျသညျပွောကွလိမျ့မညျသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကူအညီအထောက်အပံ့များအဖြစ်အသုံးပြုသည်မိန်းမများဆီသို့ဦးတည်ထားတဲ့ "သာတူညီမျှသဘောထားက" ရှိပါတယ်ပျမ်းမျှညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူသည်ကိုငါကြားထိတ်လန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသုတေသီများထိုကဲ့သို့သောအရသာကြေငြာအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှရှိပါတယ်ထင်ပါတယ့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပါပဲ။
သာတူညီမျှခြင်းနှင့် misogyny သဟဇာတမရှိကြပေ။ ; သင်သိ, ဟေးသူမကဝန်ခံကြောင့်ကြောင်းဆင်ခြေအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်တ - တကယ်တော့အချို့ရှေးရိုးစွဲရှေးရိုးစွဲကြီးဖြစ်တဲ့၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, Anti-အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ၏ကျယ်ပြန့်အများစုကယနေ့ဒီအပါမယ်ကျိုးနပ် "သာတူညီမျှသဘောထားက" မှကြွလာ အမျိုးသမီးတွေတန်းတူဖြစ်ကြပါလျှင်, ထိုယောက်ျားကသူတို့ကိုဝင်တိုက်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်ကြောင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပယ်ရယ်တတ်; သငျသညျမညျသူမဆိုအထူးကုသမှုရတဲ့ချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှငျ့သငျ, အမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပါဘူးဖယ်ရှား?
ညစ်ညမ်း, အထီးပါဝါ, misogyny နှင့်အကြမ်းဖက်မှုကြားဆက်ဆံရေး၏အမှန်တကယ်နားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲအနည်းငယ် yes သို့မဟုတ် no မေးခွန်းများကိုထက်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ သူတို့အမြိုးသမီးမြားလူသားတွေဖြစ်ကြထင်လျှင် Self-အစီရင်ခံစာမှယောက်ျားတောင်းဆိုနေတာ misogyny နားလည်ရန်ကောင်းတစ်ဦးလမ်းမရှိ, "သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုတိုင်းတာအမျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးအကူအညီပေးနေတာဖို့ကတိကဝတ်ဆိုင်သောနေရာများတွင်တစ်ဦးကောင်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလေ့လာမှုကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးဖို့တစ်ခုခုရှိမ, ဒါပေမယ့်သူက porn စောင့်ကြည့်သူကိုယောက်ျားသားအမျိုးသမီးရေးဝါဒီဖြစ်ဖို့ကပိုများပါတယ်မယ့် - ဒါကြောင့် "သာတူညီမျှ" တွင်အခြေစိုက်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲတစ်ခုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဒါမှအနတ္တကြောင်းဖွင့်, တောင်ညစ်ညမ်း-နေမကောင်းယောက်ျားကတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။